Sina Moto telo-dingana tsy miankina ho an'ny fikosoham-bato sy ny fanapahana ny orinasa ary ny mpamatsy | Leadrive
Môtô asynchronous dingana telo ho an'ny fikolokoloana vato sy ny fanapahana
Ny toetoetran'ny motera asynchronous dingana telo ho an'ny fikolokoloana vato sy ny fanapahana: ny fefy kely, ny hery avo, ny fanaovana tombo-kase tsara, ny haavon'ny fiarovana avo, ny fihoaran'ny motera, ny tabataba ambany, ny mahery ary tsy misy hetsika,
Fandidiana malama, sns.
Ny motera asynchronous dingana telo ho an'ny fikolokoloana vato sy ny fanapahana dia andiam-borona vy
Level Haavo fiarovana: IP56
Ny fanavaozana sy ny tsy fivadihana no foto-kevitro, ny fahaiza-miaina sy ny fahafaha-manatsara no tombony ho antsika. Tanjonay ny ho tonga solontenan'ny "Made in China" eo amin'ny sehatry ny motera. Ny orinasa dia mifikitra amin'ny filôzôfia momba ny raharaham-barotra amin'ny "fitandremana am-pahatsorana ary handresy am-pahalalana". Mba hahafahana mamaly ny filan'ny mpivarotra ao an-toerana sy any ivelany, dia miezaka izahay manangana ny marika "Lijiu" ary manao izay hahatonga an'i "Lijiu" ho malaza manerana ny firenena sy manerana an'izao tontolo izao. Ampiasao ny fahamendrehantsika sy ny fahendrenanay hamoronana rahampitso mifanome tanana miaraka aminao!
Previous: Môtô tsy mitambatra dingana telo ho an'ny paompy
Manaraka: Môtô asynchronous dingana telo-cooled